ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ခွင့်ပြုပြီးပွဲမိန့်များ ပြန်လည်ပယ်ဖျက်၊သင်္ကြန်ပုဂ္ဂလိကဖျော်ဖြေရေးပွဲတော်တွေ ခွင့်ပြုမပြုမသေချာသေး
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ခွင့်ပြုပြီးပွဲမိန့်များ ပြန်လ...
14 มี.ค. 2563 - 14:52 น.
ကိုဗစ် -၁၉ ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ လူစုလူဝေးဖြစ်စေမယ့်ပွဲလမ်းသဘင်တွေ မပြုလုပ်ဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ ပန်ကြားစာထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ခွင့်ပြုပြီး ပွဲမိန့်အားလုံးကို ပြန်လည် ပယ်ဖျက်သွားဖို့ ဝန်ကြီးချုပ်က မတ် ၁၃ ရက်နေ့က ညွှန်ကြားလိုက်ပြီလို့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် -၁၉ ကူးစက်ခံရသူမတွေ့ရှိသေးပေမယ့်လည်း မတ် ၁၂ ရက်က အတိုင်ပင်ခံ ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပတဲ့ ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအစည်းအဝေးအရ လူစုလူဝေးဖြစ်စေမယ့် ပွဲလမ်း သဘင်တွေ၊ သင်္ကြန်ကာလမှာ အစိုးရကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ မဏ္ဍပ်တွေကို မကျင်းပဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
' ' ပွဲမိန့်တွေ ပေးထားတွေကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့်ပွဲတွေဆိုရင်လည်း ဧပြီ ၃၀ ထိ စောင့်ရမယ်။ အခြေအနေအရ အချိန်တွေထပ်တိုးမလားလည်းစောင့်ရမယ်။ အဲ့ချိန်ထိ ရွှေ့ဆိုင်းဖို့ ညွှန်ကြား လိုက်ပါတယ်''လို့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း လုပ်ဆောင်မယ့်အခြေအနေကို လူမှုရေးဝန်ကြီးက ပြောပြပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ရုံတွေ ဧပြီ ၃၀ အထိ ပိတ်ထားရမယ်ဆိုပေမယ့် လက်ရှိမှာ ပြသနေဆဲ
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်လှထွန်းရဲ့ ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲမှာ ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုပါ ဧပြီ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ပိတ်ထားဖို့ဆိုတဲ့အချက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်ရုံအများဆုံးတည်ရှိတဲ့ မြို့ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ဆက်လက်ပြသနေတုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
'' ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိစ္စကတော့ ပြည်ထောင်စုရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စက ပြန်ကြား ရေးဌာနကအဓိကလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ မနေ့က အစည်းအဝေးမှာ ဒီအကြောင်းတော့ မပြောသွားပါဘူး။'' လို့ လည်း လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်း ကပြောပါတယ်။
အစိုးရက ဦးဆောင်တဲ့ မဏ္ဍပ်တွေ မလုပ်တော့
ရန်ကုန် သင်္ကြန် ဘယ်လိုဖြစ်လာမှာလဲ
မကြာခင်ကျရောက်တော့မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အစိုးရကဦးဆောင်တဲ့ မဏ္ဍပ်ကြီးတွေ၊ ပွဲလမ်းတွေကို ဒီနှစ်မှာ မကျင်းပတော့ဖို့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်က ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
ရနု်ကုန်တိုင်းမှာ နှစ်စဉ်သင်္ကြန်ကာလတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့မဏ္ဍပ်တွေအပါအဝင် ပုဂ္ဂလိက ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေ၊ ဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေကို အများအပြားပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
အစိုးရဦးဆောင်တဲ့ မဏ္ဍပ်တွေ မပြုလုပ်တော့ပေမယ့် ပုဂ္ဂလိက ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေ၊ ဖျော်ဖြေရေးတွေကို ခွင့်ပြုသွားဖို့ရှိမရှိကတော့ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်က ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
' ' မနေ့ကမှ ဝန်ကြီးချုပ်က မြို့တော်ဝန်ကြီးကို တာဝန်ပေးလိုက်တယ်။ သင်္ကြန်နဲ့ပတ်သက်ရင် ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို အစည်းအဝေးထိုင်ပြီး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါလို့ ညွှန်ကြားခဲ့တယ်''လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ကိုဗစ် -၁၉ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုအဆင့် ညွန်ကြားချက်တွေ မထုတ်ပြန်ခင်အချိန်တုံးက ရန်ကုန် မြို့တော်ဝန်ဦးမောင်မောင်စိုးက ရန်ကုန်သင်္ကြန်ကို အစည်ကားဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်သွား မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းမှာ သဲပန်းပုပွဲတော်အပါအဝင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ချင်းတွင်းသင်္ကြန်ပွဲကို ဒီနှစ်မကျင်းပတော့
ပုဂ္ဂလိက ဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေ၊ ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေ ၊ပွဲတော်တွေက လက်မှတ်ကြိုတင်ရောင်း ချထားတာ တွေ ရှိနေပေမယ့် မတ် ၁၄ရက်နေ့အထိ ဖျက်သိမ်းမယ်လို့ ကြေညာတာမရှိသေးသလို တိုင်းဒေသကြီး သီးသန့်ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်တာလည်းမရှိသေးပါဘူး။
မတ် ၁၃ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အစည်းအဝေးမှာ အဓိကအားဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ရောဂါကာကွယ်ရေးထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်ဖို့၊ လေဆိပ် အဝင် အထွက်တွေမှာ ဆောင်ရွက်ထားတဲ့စနစ်တွေ ၊ သံသယရှိလူနာတွေကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ကာကွယ် ရေးဝတ်စုံတွေကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရေး၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအလိုက် ဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စတွေကို စနစ်တကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ခွင့်ပြုပြီးပွဲမိန့်များ ပြန်လည်ပယ်ဖျက်၊သင်္ကြန်ပုဂ္ဂလိကဖျော်ဖြေရေးပွဲတော်တွေ ခွင့်ပြုမပြုမသေချာသေး